I-roses yasePark ibizwa ngokuthi inja-roses ehlonyelwe ngokuhluma okukhulu nokuchichima okuningi. Kusukela ezinhlobonhlobo ezijwayelekile, zihlukaniswa ngokumelene namazinga okushisa aphansi nesomiso, futhi nokuzithoba ekunakekeleni.
Izici ezijwayelekile zefomu
Izinhlobonhlobo ze- roses zepaki azidingeki ukuthi zihlanganiswe ebusika. Kodwa kukhona nezinhlobo ezincane zezintandokazi, ukushisa komgqa ophakathi weRussia akuyona into enhle kakhulu yokuthwala. Okulandelayo, futhi cabangela ukuthi yini okufanele ukhethe ukukhulisa ama-roses epaki. Izinhlobonhlobo zesifunda saseMoscow (izithombe zibonisa ngokucacile ubuhle balezi zitshalo) empeleni zivumelane cishe noma yikuphi. Kodwa-ke, ezinye zidinga indawo yokukhosela ebusika, kanti abanye abakwenzi.
Lezi zitshalo zepaki ngokuvamile azide zide kakhulu, kodwa kunalokho zihlakaza izihlahla. Baqhakaza ekuqhubekeni kwenkathi efudumele futhi bahlukaniswa izimfanelo ezinhle kakhulu zokuhlobisa. Kunezinhlobonhlobo ezinezikhala zomthunzi ohlukile kanye nosayizi, i-terry, i-semi-double, ejwayelekile, engashadile futhi eqoqwe ngama-inflorescences amancane. Amahlamvu e-roses epaki ahlaza okwesibhakabhaka futhi ahlaba umxhwele kakhulu. Kuhle futhi izithelo zalezi zitshalo - ezinkulu futhi ezikhanyayo.
Okufanele kunazo zonke izindawo ezihlukahlukene zasemadolobheni
Njengoba ungabona, izitshalo empeleni ziyamangalisa - ama-roses epaki. Izinhlobo zesifunda saseMoscow zingakhetha noma yikuphi, kodwa ezifanele kunazo zonke isimo sezulu lesikhumba esiphakathi namanje yizinhlobo zeCanada. Ngesikhathi sasebusika azinjalo, futhi abesabi ukoma noma yikuphi. Izinhlobo zesiFulentshi nesiNgisi ziphikisana kancane nemiphumela yezimo ezimbi zemvelo. Lezi zitshalo ngokuvamile ziboshwe futhi zimbozwe nge-lapnika ebusika.
Lezi zihlukahlukene, ngenxa yokungathobeki kwayo, zithandwa kakhulu phakathi kwezakhamuzi zasehlobo zaseRussia. Ngakho-ke, ake siqale ukubuyekezwa kwezinhlobonhlobo nazo. Ngakho yiziphi iRose yaseCanada okufanele uyithenge? Izinhlobo ezinhle kakhulu nezithandwayo zalokhu kukhetha kufaka:
A. Mackenzie. Terry ezihlukahlukene nezimbali ezibomvu-obomvu obukhulu obuphakathi. Isihlahla ngokwayo sikhula phezulu (1.5-2 m) futhi sihlanganiswe. Ngakho-ke, zitshala ama-roses alezi ezihlukahlukene ngokuvamile ngemuva. A. I-Mackenzie iqhakaza yonke ihlobo futhi iningi kakhulu, kodwa ngaphandle kokunambitheka. Ngokuba ebusika akusiyo i-harbored. Entwasahlobo, susa amagatsha afriziwe. Ngokuchichima kwezimbali ezinjalo azikho ithonya.
I-Morden Centennial. Isihlahla salezi zinhlobonhlobo singafinyelela ukuphakama kwe-1-1.2 m. Izimbali zalo zibomvu futhi zikhulu kakhulu - zifinyelela ku-8 cm ububanzi, ziqoqwe nge-inflorescences encane. Iphunga elimnandi likaMorden Centennial, kodwa libuthaka kakhulu. Izimbali ezindala azihle kakhulu, ngoba zineziphuzi eziphuzi. Ngakho-ke, kungcono ukuwasika. Futhi ama-frost anqabile, akwazi ukubhekana nokushisa okuphansi kakhulu (kufika ku-30-40 amagremu). Ikhula kakhulu, ikakhulu ngoJuni no-Agasti. Abanye balimi bawufihla ubusika. Kule nkinga, ungathola ngisho nokucubungula komsindo. Lezi zindawo ezidumile kakhulu zepaki. Izinhlobonhlobo zesifunda saseMoscow (ukubuyekezwa mayelana noMorden Centennial empeleni kuhle kakhulu) ungakhetha abanye. Kodwa lesi sezulu sezwekazi siphelele ngokuphelele.
Ezinye izinhlobonhlobo zalolu khetho ziyisisekelo futhi azibukeka njengabanye. Kubanjalo kungenzeka ukuphatha, isibonelo:
Isagaming. Lena ibanga eliphakeme kakhulu (kufika ku-1.8 m). Isitshalo somuntu omdala asibukeli ngisho nesihlahla, kepha isihlahla esincane. Yanikezwa lezi zihlukahlukene esifundeni saseLeningrad, ngakho-ke, ngoba amadolobha angalungile. Izimbali zakhe zine pink elimhlophe, enephunga elimnandi elimnandi. Eminyakeni emanzi, ifihlekile, ngeshwa, ingathinteka ngokubola kwegrey. Kodwa abambalwa kuphela, ngakho-ke ezimweni zokuhlobisa zesihlahla lesi sifo asinaso nhlobo. Ukuhluka okubusika kakhulu okubusika, akudingeki neze indawo yokuhlala. Kuyinto hybrid of rose engaphelele wrinkled rose futhi ikhula ngezimpande zayo. Ihlathulula ngezinqubo.
Prairie Joy. Ezihlukahlukene kakhulu ezinhle nezimbali ezindala, pink, terry, eziqoqwe inflorescences. Isihlahla sikhula phezulu (kufika ku-1.5 m). Amaqabunga amancane abe nombala we- burgundy, abantu abadala - i-matte eluhlaza. Ihluma lokhu okuhlukahlukeneyo ehlobo. Iphunga lakhe libuthakathaka, kodwa limnandi ngokwanele. Ungakwazi ukumelana kakhulu nama-frosts afanayo, kepha ebusika kungcono ukugoba isihlahla bese usimboza nge-lapnik noma ifilimu. Kulesi simo, ungathola izimbali ezikhangayo kakhulu. Ngokuvamile, kuyoba isinqumo esihle sokukhetha le mibala yepaki yesifunda saseMoscow.
Adelaide Hoodless. Ezihlukahlukene ezinamahlumela eziguquguqukayo ezidinga usizo. Izimbali zinhle kakhulu, zicebile, zibomvu, i-terry, ziqoqwe kuma-inflorescences amakhulu. Amahlamvu ahlaza okwesibhakabhaka, aqinile. Isihlahla sihlukile ngoba sikhula ngokushesha. Ubusika obunzima balezi zihlukahlukene buhle kakhulu. Akadingi indawo yokukhosela ebusika.
Lena yi-roses yasePanada enhle kunazo zonke futhi enhle kakhulu. Amabanga wesifunda saseMoscow, echazwe ngenhla, afaneleke kahle. Kodwa-ke, njengawo wonke epaki, kungcono ukuwasebenzisa ukuhlobisa izindawo ezinkulu kakhulu. Iqiniso liwukuthi izihlahla zalezi zitshalo zikhula kakhulu futhi ziluhlaza.
Ngokuba izihlahla zasebusika zalezi zihlukahlukene, kungenzeka ukuthi azifihli. Kodwa ngisho lokhu kuyi-roses yama-parses engahloniphekile. Izinhlobo ezifanelekayo esifundeni saseMoscow sokukhethwa kweFrance kukhona:
LD Braithwaite. Ezihlukahlukene ezihlukahlukene enombala obomvu obomvu obomvu wokuma nomoya omuhle obumnandi. Isihlahla se-LD Braithwaite siphakeme kakhulu, singafinyelela ukuphakama kwamamitha ayi-1.5. Amaqabunga amancane anemibala eluhlaza okweluhlaza, ama-old ahlaza okomnyama anomthunzi obomvu. Amahlumela ama-Pink ahlangene nawo abukeka emuhle kakhulu.
Umngane wabadobi. Ezihlukahlukene nezimbali zomthunzi ongavamile - i-violet-crimson. Lo mbala uhlanganiswa kakhulu ngokuhambisana namahlamvu amnyama, agcobile, kancane aphikisiwe. Iphunga lezinhlobonhlobo liqinile futhi limnandi. Ama-Buds awaqoqiwe ku-inflorescence. Ngaphandle kweglavu nalezi roses kungcono ukungasebenzi. Izinsiza abazikhulayo hhayi kuphela emahlumela, kodwa futhi nangaphansi kwezingqimba. Isihlahla sifinyelela ukuphakama kwe-1-1.2 m.
Njengoba ungabona, lezi zinhlobonhlobo zihle kakhulu futhi zifanele ukuhlobisa insimu kuhle kakhulu - i-roses yama-English park. Izinhlobonhlobo zesifunda saseMoscow zalezi zihlukahlukene zihlukene kakhulu futhi ziningi. Kodwa lezo ezichazwe ngenhla zifanelekile endaweni ephakathi yaseRussia kakhulu.
Okulandelayo, ake sibone ukuthi yiziphi izitshalo zasepaki zaseFrance ezithandwayo nabalimi. Kulokhu, izinhlobo ezinhle kakhulu esifundeni saseMoscow ziyi:
Minette. I-roses enhle kakhulu. Ama-Buds ane-shape ye-chic goblet. Kodwa emva kokuvula ngaphakathi kwe-flower yellow stamens kubonakala. Okuhlukahlukene kuyiphunga elimnandi kakhulu. Izimbali zine pink ephuzi, zishiswa zibe mhlophe. Uhlamba amahlumela ambalwa, kodwa amancane futhi angashiywa ngaphansi kwesikhumba ngendlela yezinhlanzi lapho usika. Ukuthandwa kwalezi zinhlobonhlobo kubalimi baseMoscow kunqotshwe ikakhulukazi ngenxa yokuthi akudingi indawo yokukhosela ebusika. Abalimi abanolwazi bayelulekwa ukuba bafake izithombo eduze nodonga noma ucingo. Isihlahla se-Minette sishaya futhi sinika amagatsha amaningi. Ngakho-ke, la ma-roses epaki afaneleke kakhulu esifundeni saseMoscow (isithombe sezinto ezihlukahlukene singabonakala ngezansi).
ULouise Odier. Ezihlukahlukene ezingekho izimbali ezinkulu, ezinomdlandla, eziphindwe kabili, ezibomvu kanye nephunga elinamandla. Isici salo esihlukile siwukushintshashintsha kwamahlumela. Mhlawumbe, kuyodingeka ukusekela lapho ukhula ngaphansi kwamanye amagatsha. Ukuphakama kwesihlahla kungasondela kumamitha ayi-1.5. Ngoba ebusika kudinga indawo yokuhlala.
Labo abanesikhathi esanele sokunakekela insimu, kubalulekile ukutshala ama-roses e-French park. Amabanga wesifunda saseMoscow, echazwe ngenhla, afaneleke kahle.
Yiqiniso, naphezu kokungazitholi okuncane, noma yiziphi izitshalo zepaki zidinga okungenani ukunakekelwa okungenani. Ngentwasahlobo, kumele banqunywe, futhi ehlobo - kunisela. Bese-ke bayokuthokozisa ngezimfanelo eziningi ezikhazimulayo neziphezulu zokuhlobisa. Khetha okufanayo ukuhlobisa insimu noma igceke ingaba njengeCanada engathobekile, futhi i-French elula noma yesiNgisi ehlukahlukene.
I-Cyclamen kusuka kumbewu: akuyona inzima njengoba ibonakala
Umgadli Romanian Ciprian Marica
Ingxoxo yevidiyo ngaphandle kokubhalisa
Disemba 1 eKazakhstan iholidi likaMengameli weRiphabhliki
Buyekeza Movie "Uma umalokazana - monster ...". Abalingisi, indaba, ukubuyekezwa